Ikhekhe "Kinder" - a ayengayilungiselelanga ezinhle ku izipho
Ukudla kanye iziphuzo, Kophudingi
ngokuchichima ekhulwini unika fantasy isikhala. Ungathenga ke, uma kungewona wonke, cishe yonke into ngokuqinisekile. bajabula, kodwa ngandlela-thile edabukisayo. Kungani? Yebo, empeleni ukuthi kuza isikhathi lapho ungafuni noma iyiphi usayizi kwemboni, ufuna into ethinta inhliziyo, enziwe ngezandla zakhe. Ngisho noma kungcono trinket ezishibhile, kodwa iqiniso ukuthi ukukhiqizwa wachitha isikhathi esiningi nokuzikhandla, kuwufanele ezibizayo.
Kuphela hhayi wonke umuntu limnandi izandla segolide.
Kodwa-ke nhlobo isizathu sokuphelelwa ithemba. Sikunikeza ezinye izibonelo akunzima kakhulu okwenza isimangaliso ngezandla zakhe. Cabanga indlela ukwenza ikhekhe kusukela "Kinder".
Impela wamane, wena ubhala ngeculo ushokoledi weZingane. Lokhu into yobuciko kuyafaneleka ukunikeza hhayi kuphela kwentombazanyana noma umfana. Lokhu kungaba kahle uhlobo esifubeni ukumangala ukuthi ingase yibe yinto exakayo futhi othakazelisayo ekuqaleni, futhi sijabulise ekupheleni isenzo engavamile.
Ikhekhe "Kinder" ngezandla zabo ukwenza akusiyo nzima lobu buchwepheshe. Ukuze wenze lokhu uzodinga ukuthatha ibhokisi yokuqala lapho wena ufihle isipho esikhulu, kwenanyekwe endaweni calandze umbuthano side of ushokoledi (zihambisana), bonke ubuso. Uma substrate, okungukuthi, ibhokisi ine ukubukeka ebukekayo, kubalulekile ukuba pre-anamatheliswe (ukuhlobisa) oyithandayo iphepha ezinemibala. Phezulu zingavumi kakhulu ukuhlobisa kashokholethi, ngakho le ngxenye indawo uphelele iribhoni kukhanya noma ikholaji funny izithombe, futhi othandekayo wakho umuntu wena yona.
Ikhekhe "Kinder" kuyoba isipho ukhumbuleka ngempela, uma umklamo lihlotshiswe amathoyizi esithambile. Lena ezifanele hhayi kuphela izingane ezincane kodwa nezalo amantombazane asakhula nebafati labasebasha. Kuyindida kodwa wonke lobudala enjalo akuphazamisi "abathengi" wokugcina konke ajabulile.
Ngokuphathelene kunabesilisa abengeziwe kuyinkimbinkimbi kunalokho. Akusoze kwalibaleka, lo mklamo angakhiqiza kuphela umfana omncane kakhulu, ogama yobudala ingeqi eminyakeni emihlanu, noma kulabo kakade bayoqonda ihlaya.
By endleleni, ngoba abafana kuyafaneleka esikhundleni ezithambile amathoyizi ithoyizi izimoto, izikebhe nezinye izimfanelo ngesitayela womuntu. Ngakho uma uye wanquma ukwethula lo msebenzi wezandla bebodwa, ukuhlola ngokucacile Amathemba ekuqedeni elinye kungenzeka imbangela icala kuya donee.
Ikhekhe "Kinder" futhi "Raffaello" akuyona ezahlukene okuningi kusuka enguqulweni yangaphambilini. Kuyinto isikimu efanayo senzo, kodwa iningi ikhekhe kuwukwenza ukuhlobisa ibhokisi yokuqala "rafaellok". ongakhetha Exclusive ezifana ukwenza lokho kalula ukwenza ikhekhe multi-egqinsiwe, ngokuhlanganisa usayizi amabhokisi ehlotshiswe ushokoledi. Isikhala ngaphakathi ngamunye wabo ongasigcwalisa yasekuqaleni uswidi, izithelo nezimbali.
Ikhekhe "Kinder" kusho ukusetshenziswa hhayi kuphela ushokoledi kancane, kodwa amaqanda ushokoledi, namaqebelengwane lokhu brand ( «Kinder maxi King», « Kinder Delice», «Kinder Country», «Kinder Pinqui», «Kinder Paradiso», «Kinder Ubisi locezu").
Inzuzo enkulu yale ayengayilungiselelanga yilokhu ukwenza ngezandla zakhe akunzima kakhulu, kubalulekile ukuba nesineke, umcabango kanye nezinto ezidingekayo. Believe me, isipho bayokwazisa. Ngaphezu kwalokho, cishe yonke imizi yezwe lethu, kukhona izinkampani ezinikeza ukwenza isimangaliso. Kuwufanele injabulo akuyona ebiza kakhulu, kodwa ubukeka umxhwele.
I ukushintshashintsha yesibili
Manje thina ukukunikeza ukuqoqa ikhekhe "Kinder" ubhake yena. Ukuze wenze lokhu, udinga isikhathi esengeziwe, kodwa kholwa yimi, kuyakufanelekela it. Isisekelo ikhekhe yizinkampani Ferrero Kinder kusukela uchungechunge, kodwa kunalokho "Ubisi locezu". Umqondo ilula, ngisho banal. Inqubo ukupheka kuyoba umyalelo ezidlula kulula uma une multivarka noma breadmaker. Ukupheka nabo a bhisikidi kuba lula kakhulu kunokuba uma usebenzisa kuhhavini ezivamile.
Ikhekhe "Kinder". iresiphi
Ukuze ikhekhe udinga ukubhaka elula isipanji ikhekhe nge cocoa ku ngerisiphu eyintandokazi. Kodwa ukuze ziye zaphumela ukhilimu okumnandi, udinga nje okuyinyakazisa phezulu Foam okuqinile mayelana pint cream ekubhaxabulweni (hhayi ngaphansi kuka-30%) kanye noshukela (lemali inqunywa ngokuthi ukunambitheka yakho) kanye vanilla. Lapho Foam iba namandla, kubalulekile sokunika ne eshukumisayo njalo 50 ml amanzi lapho siphela gelatin.
Asiyeki isiqondiso esicacile ngokuya ushukela, ukhilimu kanye gelatin, njengoba wonke umuntu izinto ezingafani. Othile enquma ukwenza ubisi ungqimba kancane, futhi abanye nalokho okuphambene. Ngakho-ke, unamathele izincomo nomkhiqizi gelatin, uyifaka kakhulu kudinga imfundo on ivolumu kokuqala ukhilimu.
Ikhekhe bisected, ayifake isikhunta nge Flanges detachable, ugcwalise ukhilimu Songa ungqimba engenhla ikhekhe. Phikelela esiqandisini amahora okungenani ezine. Umphumela uyoba ozithanda, kholwa kimi, ukuthi ngeke kube kancane kunokuphakela ikhekhe "Kinder" ushokoledi.
I sibonelo lokhu uju ngempela laconic, kodwa amandla akho ukuze wenze izinguquko, ekuhlobiseni amakhekhe ne chocolate ganache noma ze-mastic. Emaphethelweni zingahlungwa ochungechungeni ushokoledi encane "Kinder".
Okwamanje ngenkuthalo ukukhangisa okuthile okufanayo eyenziwe ukuma iqanda. Okungukuthi, kwakhiwa yimiphi amakhekhe ubisi / ukhilimu / cottage shizi ukhilimu Iqanda ivolumu, okuyinto lihlotshiswe mastic emhlophe. Kusukela izingcezu ezinemibala mastic izinhlamvu cut futhi izibalo abakha «Kinder» amaqanda.
Pheka ubumnandi. Jabulani obathandayo! Ngikufisela inhlahla!
Jelly ushokoledi: izimfihlo ukupheka
Imikhiqizo ufulawa confectionery. Ubuchwepheshe sokulungiselela imikhiqizo confectionery
Ukupheka ikhekhe soufflé
Uphudingi: Uphaya cranberry kanye ukhilimu omuncu, cottage shizi no amajikijolo
Filo Inhlama Recipe
Imithetho IsiZulu: amaqiniso okusheshayo
Igolide Signals - ukubuyekezwa. Alex Igolide Signals
Frank Morris: umlando Ukuphunyuka adumile Alcatraz
Izinhlelo esisheshayo ka Salvo umlilo eRussia
Pump womoya umfutho ophakeme. Womoya diaphragm futha
Ungadliwa wamaholidi: inkukhu wamabele ngo cream sauce
Thina thunga kusukela wawungathi izikhwama
Indlela yokupheka ghee ekhaya?
Izinhlobo Isikrini: resistive futhi capacitive
Amahhotela wazikala Egypt. Three phezulu